लाहुरेका सन्तान कुलप्रसाद गुरुङको अधूरो रह्यो लाहुरे बन्ने सपना, तर...
काठमाडौं । कुलप्रसाद गुरुङ यतिबेला धेरैले बिर्सिएको नाम हुनसक्छ । तर, कुनै बेलाका चर्चित कुलप्रसाद गुरुङ गुमनाम झै लागे पनि विदेशमा बस्ने नेपालीमाँझ प्रिय पात्र बनेका छन्, भलै नेपालमा चाँही कम परिचितझैं छन् । नेपालमा रहँदा विद्यार्थी राजनीतिमा साह्रै सक्रिय थिए । २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको ...
श्रावण १३, 2078 काठमाडौं । कहलिएका व्यवसायी पवनकुमार गोल्यान एनएमबि ब्यांकका अध्यक्ष समेत हुन् । ब्यांक, बीमा, होटल, जलविद्युत्, उत्पादन उद्योग लगायतमा लगानी गरेका गोल्यानले पछिल्ला वर्ष कृषि व्यवसायमा हात हालेका छन् । उनको व्यावसायिक समू...
चितवनको माडीका मेयरको बेथिति : नियम म...
असार १२, 2078 चितवन (माडी) । १८ जेठ बिहान माडी नगरपालिकाको कार्यालयमा एक व्यक्ति सरकारी माइन्यूट बोकेर पुगे । मालपोत कार्यालय माडीका प्रमुख बाबुराम जैसीको अध्यक्षतामा बसेको ‘जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति’को माइन्यूट बोकेका ती ...
मृत्युसँग जित दिलाउने यी फ्रन्टलाइनर,...
जेष्ठ १९, 2078 धनकुटा । गरे के हुन्न र ? मेहेनत र हिम्मत गरे के सम्भव छैन र ? आँट भए रोग त के कालसँग पनि जित्न सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि प्रेरणा र परामर्शको खाँचो हुन्छ । धनकुटा अस्पतालका प्रमुख डा. पुजन विश्वकर्माले मृत्युको काखमा पुगेक...
‘जतिसुकै मनमुटाव भएको भए पनि तिमी सिक...
कार्तिक २२, 2077 जिन्दगीले जुनसुकै मोड अख्तियार गरेको भएपनि तिमी कुनै समयको मेरो प्रेमी थियौ । मेरो आफ्नै जन्मदातालाई भन्दा बढी प्रेम तिमीलाई गरेरै तिमीसंग एकाकार भएकी थिएँ । हामी एक भएका थियौँ र म परम्परा अनुसार तिम्रो सिंदुरको ऋणी भएकी थ...
दुई वर्ष पछिको अप्रेसन मिति पर्खिंदै,...
आश्विन २४, 2077 काठमाडौं । बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका–५, गोत्रीका ४३ वर्षीय नरजित शाही एक वर्षअघि श्रीमती र पाँच छोराछोरी लिएर काठमाडौं आए । नरजित गोकर्णस्थित सुन्ताखानमा रहेको गाई फार्ममा काम गर्न आएका थिए । बाजुराको भीरपाखामा जति नै हा...
१२ वर्षीय बालिका हत्या प्रकरण : मष्टा...
आश्विन १४, 2077 खिकाला (बझाङ) । बझाङको मष्टा गाउँपालिका वडा नं.२, खिकालाकी सम्झना कामी १२ वर्षकी मात्र भएकी थिइन् । गाउँमा उनी कसैसँग नबोल्ने, सोझी थिइन् । तर दुर्भाग्य उनीमाथि नै दैव खनियो । गाउँकै राजेन्द्र बोहोराले राक्षस बनेर उनको इज...
'फिनसेन फाइल्स' को नेपाल कनेक्सन : ने...
आश्विन ४, 2077 गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसारपसारमा नेपालका केही बैंक र कम्पनीहरू संलग्न रहेको खुलासा भएको छ । अमेरिकाको वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी राख्ने सरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क’...
सफल व्यवसायी भण्डारी : जसको मन छ नेपा...
भाद्र २५, 2077 फिलाडेल्फिया (अमेरिका) । ‘हुने विरुवाको चिल्लो पात’ भन्ने नेपाली उखान मदन भण्डारीसँग ठ्याक्कै मेला खान्छ । भण्डारी जननेता मदन भण्डारी होइनन्, सफल व्यवसायी हुन् । जसको व्यवसायीक शैलीको चौतर्फी तारिफ हुन्छ । सबैले उनको प्रशं...
दुःखीका सहारा : ज्यान अमेरिकाको भर्जि...
भाद्र २०, 2077 फिलाडेल्फिया (अमेरिका) । नेपालीका लागि सात समुन्द्रपारीको देश हो अमेरिका । यहाँ आउने सबैको चाहना हुन्छ । कतिपयका चाहना पूरा हुन्छन्, कतिको चाहना अधूरै रहन्छन् । जुन आश्चर्यको कुरा पनि होइन । आफ्नो चाहना पूरा गर्न अमेरिका ...
किसुनजीका प्रिय पात्र, जो अमेरिकामा य...
भाद्र १०, 2077 फिलाडेल्फिया (अमेरिका) । विसं. २०६६ साल चैत ७ गते शनिबारका दिन काठमाडौंको मण्डिखाटारस्थित सुजाता कोइरालाको घरमा अरु बेलाको भन्दा बेग्लै वातावरण थियो । नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारले सन्नटा छाइरहेको थियो । २०६२/६३ सालमा ७ रा...
‘नआत्तिनु हजुरको छोरी झन मनोबल उच्च ब...
भाद्र ५, 2077 काम गर्दै गर्दा कोरोना संक्रमित भएछु । स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद । म एक नर्स म आफ्नो पेशामा गर्ब गर्छु । मलाइ थाहा छ कि म केवल सर्टिफिकेटका लागि मात्र मात्र पढेको होइन । जस्तो सुकै अवस्थामा पनि बिरामीक...
‘यो केवल सरकारको सफलताको कुरामात्रै ह...
श्रावण २७, 2077 यो कोभिड-१९ को महामारीसँग सम्बन्धित विषय अहिलेको राज्यको एउटा प्रमुख र मुख्य विषय छ । हामीले जेठ २५ गते हाम्रा विज्ञहरु राखेर अध्ययन-अनुसन्धान गर्दाखेरि उहाँहरुले के निश्कर्ष निकाल्नुभएको थियो भने पहिले बढेको रफ्तारमा नै ह...
बेरुत बिष्फोटबारे सरु गुरुङ भन्छिन्, ...
श्रावण २२, 2077 बेरुत (लेबनान) । साँझको समय । सूर्य अस्ताउने सुरमा विस्तारै अग्ला घरहरुको पछाडि लुक्दै थियो । खाजा खान भनेर हामी केही साथी रेस्टुरेन्टमा गयौं । बत्ति पनि थिएन, त्यसैले भित्र गर्मी भनेर कुर्सी बाहिर ल्याएर त्यतै बस्यौं । खा...
सोती घटना : यस्तो छ संसदीय विशेष समित...
श्रावण १, 2077 काठमाडौं । संसदीय विशेष समितिले गत जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८ सोतीमा ६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको जघण्य अपराज जातीय विभेदकै कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘मृतक नवराज बिक र निजको प्रेमीकाको पनि ...